Bubata data si OpenStreetMap na QGIS - Geofumadas
Julaị, 2015 Geospatial - GIS, qgis
Ọnụ ọgụgụ data dị na ya OpenStreetMap ọ dị oke obosara, na ọ bụ ezie na ọ bụghị kpamkpam oge niile, n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ bụ ihe ziri ezi karia ihe ndekọ data na-achịkọta site na nhazi ihu igwe na 1 scale: 50,000.
Na QGIS ọ dị mma ịkwanye oyi akwa a dị ka map nke dị ka oyiyi Google Earth, nke nkwụnyerịrị adịworị adị, ma nke a bụ nanị map ndabere.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ịnweta oghere OpenStreetMap dị ka vektị?
1. Download ihe nchekwa data OSM
Iji mee nke a, ị ga-ahọrọ ebe ị na-atụ anya ibudata data. O doro anya na oke nnukwu ebe, ebe enwere ọtụtụ ozi, ọnụ ọgụgụ nke nchekwa data ahụ ga-adị ukwuu ma na-ewe oge. Iji mee nke a, họrọ:
Vector> OpenStreetMap> Budata
Lee ị họrọ ụzọ ebe a ga-ebudata faịlụ xml na mgbatị .osm. O kwere omume igosi akụkụ dị iche iche site na oyi akwa dị ma ọ bụ site na ngosipụta dị ugbu a nke echiche ahụ. Ozugbo ahọpụtara nhọrọ ahụ anabata, usoro nbudata amalite ma a na-egosiputa olu nke data ebudatara.
2. Mepụta data
Ozugbo ebudatara faịlụ XML, ihe achọrọ bụ iji tọghata ya n'ime nchekwa data.
Emere nke a na: Vector> OpenStreetMap> Bubata topology sitere na XML ...
N'ebe a, ọ na-arịọ anyị ka anyị banye na isi iyi ahụ, faịlụ DB nke SpatiaLite ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ejikọta njikọ mbubata ozugbo.
3. Kpọọ oyi akwa na QGIS
Ịkpọ data dị ka oyi akwa chọrọ:
Vector> OpenStreetMap> Mbupu topology na SpatiaLite ...,
A gha egosiputa ya ma oburu na anyi gha akpo nani isi, uzo ma obu polygons. Ọzọkwa na bọtịnụ Ibu Ibu site na nchekwa data ị nwere ike depụta nke bụ ihe mmasị.
N'ihi nke a, anyị nwere ike ịdado oyi akwa na map anyị, dị ka a hụrụ na foto na-esonụ.
N'ezie, ebe ọ bụ na OSM bụ ihe na-emeghe emeghe, ọ ga-abụ oge dị ogologo maka ngwaọrụ ndị nwere ike ime ụdị ihe a.
Previous Post«Previous JOSM - A CAD maka edezi data na OpenStreetMap
Next Post Ijikọ ọha mmadụ - Geomatics Isiokwu maka International Informatics Fair 2016Next »